I-VILLA "IGREEN PARADISE"
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguAltin
I-villa ibekwe kwi-suburbs yesixeko kwindawo ezolileyo. Kukho umgama malunga ne-2-3 Km ukusuka kwiPaki yeSizwe yeDivjake-Karavasta kunye neLagoon yaseKaravasta.
Ukusuka kwi-villa elunxwemeni malunga ne-5 Km.
I-LAGOON OF KARAVASTA lelona chibi likhulu e-Albania kwaye lelinye likhulu kuLwandle lweMeditera, elithatha indawo ye-42 km2 (16 sq mi). IKaravasta iyinxalenye yeDivjakë Karavasta National Park kwaye yahlulwe kuLwandle lweAdriatic sisiqwenga esikhulu sesanti. Ithe saa kwithafa elingaselunxwemeni iMyzeqe kufuphi neDivjakë kunye neekhilomitha ezingama-20 (12 mi) kufuphi neLushnjë.
I-Karavasta ibamba imithi emininzi yepine kunye neziqithi ezincinci zesanti. Idume ngokubamba i-Dalmatian pelican; I-6.4% yabemi baseYurophu be-Dalmatian pelican ifumaneka eKaravasta. Ichweba liwela phakathi kwamahlathi e-Illyrian avuthuluka amahlathi asemhlabeni amahlathi e-Palearctic eMeditera, ihlathi kunye ne-scrub. Imozulu idla ngokuba yiMediterranean.
Ichweba libekwe ngaphakathi kwemida yeDivjaka-Karavasta National Park kwaye liye laqatshelwa njengomgxobhozo obalulekileyo kumazwe ngamazwe ngokumiselwa phantsi kweNkomfa yeRamsar. Ichweba lichongwe njengeNdawo yeeNtaka eziBalulekileyo yi-BirdLife International, kuba ixhasa amanani abalulekileyo abemi beentlobo ezahlukeneyo zeentaka.
Ichibi laseKaravasta likuLuhlu lwemigxobhozo yeRamsar ebalulekileyo kumazwe ngamazwe kwaye iyinxalenye yeDivjake-Karavasta National Park. Ngaphakathi komda wepaki kufunyanwa inani leendawo zokutyela ezineentlanzi zeDivjaka ezidumileyo kwindawo yokutyela ehlathini, eyaziwa kakhulu ngeentlobo zeentlanzi, imifuno ephekiweyo.
Kuba amaphulo okubulala iintsholongwane kudala enqunyanyisiwe, le ndawo yaziwa ngokuba inexesha lengcongconi elisebenza kakhulu. Nangona kunjalo, ngo-2014, amaphulo okubulala iintsholongwane sele eqalile kwaye iprojekthi yokuvuselela ipaki iqaliswe ngabasemagunyeni belizwe. Yayiquka ukumiswa kokuzingela okwavuselela imisebenzi yokubukela iintaka.
Abamelwane banobuhlobo kwaye nomoya wamkelekile.
Umbuki zindwendwe ngu- Altin
Ngefowuni 00355684027430, sms, Whatsapp, viber, e-mail.